Ny resaka mahaliana nataon’i Margot Camones Maguiña, nitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas nandritra ny herinandron’ny 20-26 mey 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2019 5:38 GMT
Sary nomen'i Margot Camones Maguiña
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Margot Camones Maguiña(@MargotCamones) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Margot Camones Maguiña no anarako, avy amin'ny tanànakelin'i Huacnae, ao amin'ny distrikan'i La Merced, ao amin'ny faritanin'i Aija, ary ao amin'ny faritra Ancash ao Però aho. 37 taona aho, mpampianatra, ary miasa ao amin'ny minisiteran'ny fanabeazana amin'ny maha-manampahaizana manokana eto amin'ny firenena amin'ny fanabeazana teniroa iraisan-kolontsaina. Mavitrika ihany koa aho amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny fiteny Quechua amin'ny media sosialy, sy ny media nomerika amin'ny sehatr'asa isan-karazany, indraindray miaraka amin'ny fanehoana famindram-po, izay miteraka fifaneraserana mahatalanjona avy amin'ny mpisera Facebook sy Twitter.
Koa satria moa manampy ny olona hianatra bebe kokoa momba ny fiteny ny voambolana tsirairay sy ny lahatsary, manoratra sy mamoaka lahatsoratra amin'ny alalan'ny fampitam-baovao isan-karazany ihany koa aho: Manana fantsona YouTube roa aho (fantsona 1, fantsona 2), izay ampielezanay lahatsary mifandraika amin'ny fiteny Quechua sy ireo hetsika ara-kolontaina isan-karazany. Manana bilaogy iray ihany koa aho izay izarako ireo rohy hampiroboroboana ny fiteny Quechua eto amin'ny sehatra nomerika; ary maro ireo karazana hetsika ara-tsosialy ataoko hanohizana ny fampielezana ny mahazavadehibe ny Quechua any amin'ny seha-bahoaka rehetra ho zon'ny rehetra.
Indreto ny rohy miavaka sasantsasany:
Amin'izao fotoana izao, araka ny fanisana nataon'ny INEI (Ivontoeram-Pirenena amin'ny Antontanisa sy Kajimirindra), manana ny lanjany ny isan'ireo mpiteny Quechua; na izany aza, misy ny fahabangam-panairana sy fifaharana mba hitenenana izany imasom-bahoaka amim-pijoroana, ary amin'ny lafiny maro dia any an-trano ihany no ampiasana ny fiteny. Izany no antony nahatsapako fa ny media nomerika vonona amin'izao fotoana izao no fitaovana matanjaka hamerenana ny vahoaka no any amin'ny faka niandohany.
Vitsy aminay no manolo-tena hanao ity raharaham-pampielezana ny fiteninay amin'ny alalan'ny aterineto ity, rehefa hita fa misy asa fanampiny sy mila fanoloran-tena betsaka izany; na izany aza, mila mahafantatra ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy ny fampitam-baovao izahay mba hampahery anay sy anohizanay amin'ny fampidirana ny fampiasana azy amin'ny fomba rehetra azo atao.
Misy ny filana politikam-piteny mazava avy amin'ny governemanta amin'izao fotoana izao. Izany no antony nananganana ny Fikambanam-Paritry ny Vahoaka Quechua eto Ancash, efa fotoana elaela izao, izay mametraka politika mahaliana any amin'ny fiadidiam-paritra sy fiadidiana any an-toerana sasantsasany.
Lahatsary fampahafantarana ny Quechua amin'ny alalan'ny YouTube ny lohahevitra horesahako ary ao no hanangonako ny fijoroana vavolombelona ireo olona fanta-daza miteny ilay fiteny, handrisihana ny hafa hampiasa azy, ka jerena ireto lafiny manaraka ireto:
Lahatsoratra natao hampisaina amin'ny video sy fijoroana vavolombelona fohifohy amin'ny maha-zavadehibe ny fampielezana, fitenenana, fikojakojana ary fampiroboroboana ny fampiasana ny Quechua.
Fampahafantarana ny politikam-pitenenana avy amin'ny manampahefana (video)
Fijoroana vavolombelona ataon'ireo teratany miteny Quechua amin'ny antony mahamenatra azy ireo hiteny Quechua.
Sary-sy-soratra natao ihomehezana fampielezana ny zo ara-piteny.
Lahatsoratra amin'ny mahazavadehibe ny fampiroboroboana ny fahavitriham-piteny nomerika.
Ny fitiavako ny Quechua no mampavitrika ahy voalohany satria mihevitra aho fa zon'olompirenena izany, ao anatin'ny vakoka, ary ambonin'izany rehetra izany, fomba fiainana izany izay apetrako ho andraikitra ara-piarahamonin'ny vahoakako, ny tanànako, ny (ray amandreniko) ary ny raiamandrenibeko.
Nofinofiko fa hahazo vahana any amin'ny sehatra rehetra ny fiteniko, fa ho mpiaradia aminay ny media nomerika, fa ho maro ny olona hampiely ny fiteniny amin'ny sehara fampitam-baovao rehetra, fa hovahana araka ny fomba fijery ara-kolontsaina sy fiteny ny olana ara-piarahamonina mianjady aminay.
Nofinofiko fa tsy hisy ny fanamarinana amin'ny antony tsy ampianarana ny Quechua any an-tsekoly, fa hisy ny manampahefana Quechua, ary hanome fitaovana ireo handrisihana ny fikarohana ho amin'ny fiteny teratany, ary hisy ny tetibola ho an'ny sampan-draharaham-panjakana mba hananana torohay momba ny fiteny zanatany any amin'ny tranonkala sy fampitam-baovao hafa.